Yintoni inkcazo kunye nendlela yokwenza, isikhokelo esifutshane kubathengi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Yintoni inkcazo kunye nendlela yokwenza, isikhokelo esifutshane kubaxumi
UkufutshaneIsishwankathelo… Kodwa yintoni leyo? Kutheni isenziwa? Ndiyenza njani? Ukuba ukhe waqesha inkonzo yoyilo, kunokwenzeka ukuba ulivile eli gama. Ngapha koko, nokuba awuyazi, eli gama kunye nendlela othetha ngayo ngokuqinisekileyo ziya kulungisa ubudlelwane bakho nomyili kunye nomgangatho wekhomishini yakho. Qonda ukuba yintoni inkcazo, luncedo lwayo kwaye, ngaphezu kwako konke, ukuba yenziwa njani, iya kwenza ishishini lakho libe nezona zoyilo zibalaseleyo kwaye uya kuthandwa ngabo bonke abayili.
Ingaba unomdla? Ndicinga njalo, kwaye kakhulu. Ndiyathembisa ukuba kunjalo kulula ukuyiqonda, engazukuthatha imizuzu emi-5 ukuqonda ukuba ungayenza njani. Kwaye izibonelelo ziya kuba zininzi. Zonke zihonjiswe nge-infographic onokuzigcina ukuze ungalibali nantoni na. Ngaba siza kuqala?
1 Yintoni ingcaciso
2 Uyenza njani inkcazo elungileyo
Ungena evenkileni uku-oda isuti eyenzelwe yona. Kwaye malunga nesuti Kuya kufuneka uchaze uthotho lwemibuzo eya kuba nefuthe kwiziphumo: ufuna oluphi uhlobo lomnyhadala, zeziphi izinto ozikhethayo ngokobume kunye nombala, unemali engakanani? Ewe, into efanayo iyenzeka kuyilo. Kwaye le ngcaciso ekufuneka uyinike umthungi wakho, kwicandelo lezonxibelelwano, yaziwa ngokuba kukunika ingxelo.
Isishwankathelo luxwebhu, ibali, esichaza ngalo nomyili ukuba singobani, sifuna ntoni, sifuna ntoni. Sikuxelela yonke into echaphazela ishishini lethu: ngamagama, ngemifanekiso, ngedatha ...
Uyenza njani inkcazo elungileyo
Elungileyo Isishwankathelo sibhalwe kakuhle. Chaza izinto ngokungagungqiyo, ngokuthe ngqo, ngaphandle kokukreqa. Zekelisa izimvo zakho ngemifanekiso yesalathiso ekufuneka ithathelwe ingqalelo ngumyili. Xa sigqiba ukuyifunda, sinoluvo lokulazi kakuhle eli shishini, imbali yalo, iminqweno yalo… Sinoluvo lokuba ishishini lelethu. Kwaye kulapho siyila ngokungathi yeyethu.
Kwenzeka ntoni xa singabhali sishwankathelo? Umyili usijonge kakubi. Nangona kubonakala ngathi. Uya kusenza udliwanondlebe nathi (nge-imeyile okanye ngobuqu) ukuze sikwazi ukuyibhala kunye. Ngamanye amagama, uya kuba utyala ixesha ekulungiseleleni uxwebhu ebesinokulenza njengabaxumi. Kwaye oku kulingana nohlahlo-lwabiwo mali oluphezulu kunye neentsuku ezininzi zokwenza iprojekthi. Uyabona? Ukwazi indlela yokwenza ushwankathelo olufanelekileyo kunomvuzo. Yenzela sonke.
Nanku umfanekiso we amacandelo ekufuneka enawo Ubufutshane ubuncinci.
Ishishini lakho / imveliso yakho: Thetha ngazo. Yitsho amandla akho, akho amanqaku abuthathaka. Ungoyiki ukuyenza, luxwebhu oluyimfihlo oluza kuhlala luphakathi kwakho nomyili ochaphazelekayo, ukhuphiswano lwakho alunokwazi. Esisiseko, icandelo elisisiseko: ngaphandle kwale asinakwenza nto.
Ukhuphiswano lwakho: Igama labo, into abayithengisayo, bayithengisa njani, phi, into abayidlulisayo, imibala yabo, iisimboli ...
Umxhasi wakho: Intoni uhlobo lomntu ngu? Ulutsha, umntu omdala, umntwana ofikisayo, umntwana ofikisayo, ovuthiweyo, onomdla, ozigcinayo, onenkcubeko ebonakalayo, uthanda ukutya okukhawulezayo ...
Ngaba iluncedo kuwe? Ngaba ucinga ukuba kukho into engekhoyo kwesi sikhokelo sifutshane sabathengi? Gqabaza!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Yintoni inkcazo kunye nendlela yokwenza, isikhokelo esifutshane kubaxumi
UCarlos Cabanillas Alva sitsho
Ndiyithandile kakhulu, ndizifundile izithuba ezininzi malunga neNkcazo kwaye akukho namnye kubo obonakala ngathi uchazwe ngcono kunale, ubuqili obukhulu xa uyichaza. Igalelo elihle kakhulu .. kuyacetyiswa (kwaye)
Phendula uCarlos Cabanillas Alva
Molo Lúa, ndilithandile inqaku lakho, kwaye ndicinga ukuba ndiza kulisebenzisa icebiso lakho, enkosi kwaye uqhubeke
Enkosi kakhulu, ezi ntlobo zamagqabantshintshi ziyaxatyiswa :)
NGOKUGQWESILEYO !!!!! Icacile kwaye ikhonkrithi, ndiyithandile kakhulu
Iiphepha ezili-14 zokuSebenzisa kwiFotohop
Ukuqokelelwa kweefonti zasimahla ezingama-77